Ihuenyo Mbipụta Machine, Silk Screen Machine, Ihuenyo Printer - Xinfeng
Linqing Xinfeng Screen Printing Machinery Factory emi odude ke Linqing China, ọkachamara emeputa nke ihuenyo ebi akwụkwọ igwe na yiri tupu pịa na post-pịa equipments kemgbe 1996, dị ka ihuenyo ndinyanade mbịne igwe, ihuenyo ikpughe igwe, ebu ebu draya, infrared flash draya na UV draya. .
Anyị factory ekpuchi 20000 square mita. Kpamkpam nwere 5 ọrụ edoghi, Anyị nwere Lathe Machine, egweri Machine na CNC machining Center iji nweta ezi akụkụ wụnye na anyị ígwè obibi akwụkwọ igwe.
Ndị ahịa anyị na ndị ọzọ nọ na ụlọ ọrụ ahụ na-asọpụrụ anyị nke ọma n'ihi ihe ọmụma anyị banyere usoro igwe nyocha ihuenyo na nlebara anya onwe anyị anyị na-enye ndị ahịa ọ bụla. Anyị na-enye usoro zuru ezu nke igwe na ngwa ahịa nke ogo na arụmọrụ kacha elu.
Gịnị bụ isi ngwa ebe nke akpaka ihuenyo ebi akwụkwọ igwe?
Silk ihuenyo ebi akwụkwọ technology, makwaara dị ka ihuenyo ebi akwụkwọ Usoro, a stencil ebi akwụkwọ technology, na nke a bụ nke mbụ na-ebi akwụkwọ technology sitere China ...
Etu esi gbakọọ ma chịkwaa eriri ...
Ojiji eji ebi akwụkwọ ink: 1. Okpukpo nke ihe nkiri (na-ekpebi ego ink). Ọ bụrụ na anyị ejiri gluu nke na-ewe ihe mmetụ iji mee ihuenyo ahụ, anyị ga-atụlekwa ọdịnaya siri ike nke mama ahụ na-ese foto n'onwe ya. Mgbe ...
Etu ị ga-esi họrọ ihe ntanetị akwụkwọ ntanetị ...
1. Ihuenyo Nọ na-ekwukarị, okpokolo agba eji mee ihe na ntanetị bụ ọtụtụ aluminom alloy. Aluminom okpokoro agba nke ukwuu na-eto ndị ọrụ n'ihi na ha tensile eguzogide, elu ike, ezi mma, ìhè itu ...
Ihuenyo Silk Printing Machine, Glass Screen Printing Machine, Silk Screen Printing Machine, Igwe Mbipụta Igwe, Akpaaka Screen Printing Machine, Silkscreen Printing Machine,